တို့ ရွာသာယာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တို့ ရွာသာယာ
Posted by မောင် ပေ on Sep 10, 2011 in Creative Writing, Short Story | 21 comments
တစ်ရံရောအခါ က ဖြစ်ပါသည် ။
ရွာကြီးတစ်ရွာ ရှိသည် ။ သာယာဝပြော စည်ကား သည် ။
တစ်နေ့ …တစ်နေ့ရွာထဲ သို့ အလည်လာသူ ၊ အခြေချ နေရန် ၀င်လာသူ များ ဖြင့် စည်ကားလှပေသည် ။
တစ်နေ့ တွင် ဖြစ်သည် ။
ရွာထိပ်ရှိ ဇရပ်ပေါ်တွင် ရွာခံနှစ်ဦး( ယောက်ျားကြီး တစ်ဦး နှင့် မိန်းမပျို တစ်ဦး ) နှင့် ရွာထဲသို့အခြေချလာသူ လူငယ်တစ်ယောက် တို့ ဆုံဖြစ်ကြသည် ။
လူငယ် က စကား စဆိုသည် ။
` ဘကြီး…အခြေအနေ ´
` ဘာအအြေနေ ကို သိချင်တာတုန်း မောင်က ´
` ဟုတ်ပ…ကိုရင်မေးလိုက်ပုံ က ဘာသိချင်မှန်းကို မသိ ´
` ဒီလိုပါ…ကျွန်တော် က လူသစ်ဆိုတော့လေ ၊ ရွာထဲ က လူတွေ နဲ့ ခင်မင်ချင်တာပေါ့ ၊ အဲဒါကြောင့်..လောကြီးပြီး စကားလောသွားတယ် ၊ စီးပွားလုပ်ငန်း ကောင်းပါရဲ့ လားဗျ ´
` စီးပွားကတော့…မင်းလဲ မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ၊ တို့ ရွာ က မရှိမရှားတွေ ချည်းဆိုတော့ ၊ စီးပွားကိစ္စ ဦးမစား (အုန်းမစား ဟု ဖတ်ပါခင်ဗျာ )ဘူးရယ် ´
` တော်က..လူသစ်ဆိုတော့ ၊ ဒီရွာ က ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် လေးတွေ ကို အဘ ကို မေးပေါ့ ၊ ကျုပ်တော့ အိမ်အလုပ်လေးတွေ ရှိသေးလို့ ပြန်ဦးမယ် တော်ရေ ၊ နောက်မှ ဆုံကြသေး တာပေါ့ ´
` အဘ ၊ ဟိုလုံမပျို ပြောသွားတဲ့ ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် တွေ ကို လင်းပါဦး ဗျာ ၊ ကျွန်တော် က လူသစ်ဆိုတော့ ၊ မှတ်သားရတာပေါ့ ´
ရွာခံ လူကြီး လည်း ရေနွေးတစ်ကျိုက် ကို ကောက်မော့ ရင်း စဉ်းစားနေသည် ။ ပြီးမှ
` အိမ်း…၊ သိချင်သပ ဆိုရင်လည်း ပြောပြရပေ မပေါ့ကွယ် ၊ ဒါနဲ့ ..မောင်ရင့် စီးပွားပိုင်ဆိုင် မှုအခြေအနေ လေး ကို အရင်သိချင်သကွဲ့´
` အဘမြင်မှာပါ ၊ ကျွန်တော် က တော့ ကိုယ့်အတတ်ပညာနဲ့ ကိုယ် လုပ်စားနေတာပဲ ၊ ကိုယ်ပိုင် ဦးဏှောက် ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်နဲ့ ပေါ့ ၊ကျွန်တော် က တီဗီတွေ ၊ ဗီစီဒီ ၊ ဒီဗီဒီ တွေ ကောင်းကောင်းပြင်တတ်ပါတယ် ၊ ဒီရွာ မှာ အိမ်တိုင်းလိုလို ရှိနေတော့ ၊ ရောင်းဝယ်ပြုပြင်ရေးဆိုင်လေး လာဖွင့်ဖြစ်တာပါ ။ စုမိဆောင်းမိတော့ သိပ်မရှိဘူးပေါ့ အဘရယ် ´
` ကိုယ်ပိုင် ဦးဏှောက် နဲ့ လုပ်စားတယ် ဆိုကတဲ က မင်းနဲ့ ငါ နဲ့ တွဲလို့ ရပြီမောင် ´
` ဘာလို့ လဲ ဗျ ´
` ဒီလို ကွ ၊ တို့ ..ဒီမှာက တစ်ခု ရှိတယ် ၊ ရွာသူရွာသားတိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူး ၊ လူနည်းစုလေးပေါ့ကွာ…၊ အေး..ဘာလုပ်ကြသလဲ ဆိုတော့ ၊ ခိုးရာပါ ပစ္စည်းတွေ နဲ့ လုပ်စားကြတာကွ ´
` ဗျာ..ခိုးရာပါ ပစ္စည်း ´
` အေးဟုတ်တယ်…ရှင်းရှင်းပြောရရင် ၊ ရွာက လူနည်းစု က တစ်ခြားက ခိုးလာတဲ့ ဟာတွေ ကို တို့ ရွာမှာ ထုခွဲကြတာကွဲ့ ၊ တို့ ရွာကြီး စည်လာတယ် ဆိုတာလဲ ၊ အခိုးခံရတဲ့ သူတွေ လည်း လာ စုံစမ်းကြတယ် ၊ တစ်ချို့ ကြတော့ လည်း ၊ ဒီလိုမျိုး…ခိုးရာပါပစ္စည်းတွေ ကို ဒီမှာ လာထုခွဲ လို့ ရတယ် ဆိုတော့ ၊ လာကြတာပေါ့ကွယ် ၊ ဒါပေမယ့် အများစု က တော့ ဒီမှာ တစ်ကယ် နေလို့ ကောင်းလို့၊ လုပ်ကွက် တွေ့ လို့ လာကြတာပါ ´
` ဒီအကြောင်း ကို သူကြီး က ဘာမှ အရေးယူ မလုပ်ဘူးလား ဟင် ´
` အေး..သူကြီးဆိုလို့ ….တို့ သူကြီး အကြောင်းကို ပြောပြချင်သေးတယ် ´
` ဟုတ်..ပြောပါအဘ ´
` တို့ သူကြီး က အလုပ် အင်မတန်မှ များတာကလား ၊ ဒီရွာကို သူအုပ်ချုပ်နေတယ် ဆိုပေမယ့် ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကို အသေးစိတ် မလိုက်နိုင်ရှာဘူးကွဲ့ ၊ သူ့ ဗျာ လည်း သူ့ မိသားစု ၀မ်းရေး ဖို့ က ရှိသေးတာကိုး ၊ တို့ ရွာထဲ က သက်ကြီးပိုင်းတွေ လောက်ကပဲ ၊ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ၊ အမြင်မတော်တာတွေ့ ရင် ၀င်ထိန်းသိမ်း ဆုံးမ ကြရတော့ တာပေါ့ကွယ် ´
` သြော်…. ´
လူငယ်သည် သက်ပြင်းအရှည်ကြီး ချလိုက်သည် ။
` စောန က လုံမပျို ဆိုရင် ၊ ရွာထဲ က ဒိတ်ဒိတ်ကျဲပေါ့ကွယ် ၊ နောက် တိုင်းရင်းဆေးဆရာမလေး တစ်ယောက်ရှိသေးတယ် ၊ သူတို့ က တော့ အလိုက်သင့်လေး ထိန်းပေးနေတာပေါ့ ´
လူငယ်သည် ခေါင်းတစ်ငြိမ့်ငြိမ့် ဖြင့် ၊ ရွာခံ လူကြီး ၏ ရေနွေးခွက်ထဲ သို့ ရေနွေးထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်သည် ။ လူကြီး သည် ရေနွေး တစ်ကျိုက် ထပ်သောက်ရင်း
` တစ်ခြားမပြောနဲ့ …ငါတောင် ဟိုတစ်လောက ၊ ကိုယ်တိုင် တောလိုက်ရင်း ပစ်လို့ ရလာတဲ့ တောဝက်သားတွေ ကို အခြောက်လှမ်းထားတာ ၊ နောက်နေ့ ကြ အခိုးခံ လိုက်ရသကွဲ့ ´
` ဟာ..အဲဒီလောက်တောင်လား ´
` အဲဒါထက် ပိုဆိုးသေးတယ်မောင် ၊ ငါ့ ဆီ က လစ်သွားတဲ့ ၊၀က်သားခြောက်တွဲ က နောက်နေ့ ကြ ၊ ရွာထဲ မှာ လိုက်ရောင်းနေတယ် ဆိုပဲ ´
` ဟင်…ဆိုးပ ၊ အဘ ဘာမှ အရေးယူ ၊ တိုင်တာ တွေ မလုပ်ဘူး လား ´
` အေးကွာ….ကြုံရပါ များလာတော့ လဲ ငါတို့ လည်း အရေထူနေပါပြီကွယ် ၊ အဲဒီလို လုပ်တာကလဲ လူနည်းစု ဆိုတော့ ၊ မသိချင်ဟန်ဆောင်ပေးရတာပေါ့ ကွာ ´
` ဒါဆိုရင်…ဒီရွာထဲ က ဇရှိသူ ၊ နာမည်ပျက် ရှိသူလေး တွေ ပြောပြပေးပါဦး အဘရယ် ၊ ကျွန်တော် လည်း ကြိုရှောင်လို့ ရအောင်ပေါ့ ´
သို့ နှင့် ရွာခံ လူကြီး နှင့် လူငယ်တို့ သည် အနီးကပ်သွားပြီး
` ကွိစိxxxကွစ—-့ကွိစိxxxကွစ ´
သို့ နှင့် အချိန်ကာလ များ ကျော်လွန်ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ ၊ ၄ လ ခန့် ကြာအပြီး တွင်၊ လူငယ် သည် သူ ၏ ဆိုင်ထဲ တွင် ထိုင်နေစဉ် သကာလ ရွာသူ ဂျမ်းဘုံ ရောက်လာသည် ။ ဂျမ်းဘုံ သည် မည်သို့ အကြောင်းကြောင့်မှန်းမသိ ။ ရွာခံ လူများကို က သူမကို ရှောင်ကြသည် ။
` ဟဲ့ ၊ နင် က တစ်လောက တို့ ဆီ ရောက်လာတဲ့ ၊ လူသစ်မလား ´
` ဟုတ်ကဲ့ပါ ၊ ကျွန်တော် ဘာများ အကူအညီ ပေးရမလဲ ´
` နေစမ်းပါဦး ၊ နင့် ဆိုင်းဘုတ် ကို ဖတ်ကြည့်တော့ ၊ တီဗီ တွေ ရောင်းတယ် ၊ အောက်စက်တွေ ရောင်းတယ် ပြုပြင်တယ် လို့ ရေးထားတာနော် ´
` ဟုတ်ပါတယ် ၊ ဘာလဲ..ဒီက အမ လေးက တစ်ခုခု များ ၀ယ်ချင်လို့ လား ၊ ဒါမှ မဟုတ် ပြင်စရာ များ ရှိလို့ လား ´
` မရှိပါဘူး ၊ ငါ နင့်ကို မေးချင်လို့´
` ဟုတ်..ဘာများပါလိမ့် ´
` နင် က တီဗီ တွေ ပြင်တယ် ဆိုတော့ ၊ ဟိုနေ့ က ငါ သတင်းစာထဲ မှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ကွန်ပျူတာ ဆိုတဲ့ ဟာတွေ ကော ပြင်တတ်သလားလို့´
` မပြင်တတ်ပါဘူး ၊ ဘာလို့ လဲ…အမ မှာ ကွန်ပျူတာ ရှိလို့ လား ´
` ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ…ငါ့ဟာငါ တောင် အနိုင်နိုင်၊ ဘယ်က လာ ရှိရမှာလဲ ၊ဒါနဲ့ကွန်ပျူတာ ဆိုတာ လဲ တီဗီ ပါတာပဲ မလား ၊ နင် က တီဗီ ပြင်တဲ့ လူ ဆိုတော့ ပြင်တတ်ရမှာပေါ့ ၊ မပြင်တတ်ဘူး ဆိုတော့…နင့်ဟာက ၊ တော်ပြီ..မဟုတ်သေးပါဘူး ´
လူငယ်လည်း စိတ်ပေါက်သွားသည် ။
` ကျွန်တော် လည်း ပြန်မေးပါရစေဦး ၊ ဒီက ခင်ဗျား မှာကော..၊ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ကွန်ပျူတာ အသာထားပါဦး ၊ ကိုယ်ပိုင် တီဗီ တစ်လုံး တောင် ရှိလို့ လား ´
ဂျမ်းဘုံ ၏ မျက်နှာမှာ ၇ ရက်ခန့် ဝမ်းချုပ်ထားသူ တစ်ယောက် လို ရှုံ့ မဲသွားတော့သည် ။ ခါးကြီးထောက် ကာ ၊ စီးထားသော ခုံဖိနပ်ကောက်ချွတ် ပြီး ကောက်ကိုင်လိုက်သည် ။
လူငယ်လည်း အခြေအနေ မလှသည် ကို ရိပ်မိသွားပြီး ၊ သူ့ ဆိုင်ထဲ မှ `စပါယ်ဖူးကျောက်လှည့်´ ကို ကောက်ကိုင်မိသည် ။
လူငယ် ၏ ပုံမှာ တစ်ကယ် ပြန်ဆော်မည့် အနေအထားကို တွေ့ မိသွားသော ဂျမ်းဘုံသည်လည်း သူစီးလာသော ခုံဖိနပ် အပေါက်အစုတ် ကို ပြန်ချ ကာ ၊ ရှူးရှူး ရှဲရှဲ နှင့် လှည့်ထွက်သွားတော့လေသည် ။
ထိုအခါ မှ လူငယ်သည် လည်း သက်ပြင်းပူကြီး ချကာ…..
` သြော်…အဘ ပြောတာ တယ်မှန်တာပဲ ၊ မပြည့်တဲ့ အိုးတွေ ဘောင်ဘင်ခတ်ပြလိမ့်မယ် ဆိုတာ ၊ ဟင်း….တို့ ရွာလဲ မလွယ်ပါကလား ၊ နောက်ကို ဆင်ခြင်မှပါပဲ ´
သို့ နှင့် လူသစ်သည် သူ့ ဆိုင်းဘုတ် ကို ဤသို့ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်လိုက်ရတော့လေသတည်း ။
` တီဗီ၊ဗီစီဒီ၊ဒီဗီဒီ များကို ပြုပြင်ရောင်းဝယ်သည် ´
` မှတ်ချက် ။ ။ ကိုယ်ပိုင် မရှိပဲ ၊ ၀ယ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ လာရောက် ဗရုတ်ကျခြင်း သည်းမခံပါ ´
ခိုးလာတဲ့ပစ္စည်းမိလို့.. ပိုင်ရှင်ပြန်အပ်ဖို့သယ်လာပါတယ်.. သူကြီးကို သူခိုးလို့ပြောလိုပြော..။
သူတပါးအိမ် . အိမ်ရှင်အသိမပေးပဲမတက်ရလို့ ပြောထားစည်းကမ်းထုတ်ထားတာကို.. လူမရှိတဲ့အိမ်.. သူခိုးတက်နေလား..၀င်စစ်ဖို့.. ရှေ့ပေါက်ကပဲ… တခါးဖွင့်ဝင်ပါတယ်..။
စည်းကမ်းကစည်းကမ်းပဲ.. ကိုယ်ထုတ်တဲ့စည်းကမ်း.. ကိုယ်မဖေါက်ရဘူး.. သူကြီးလည်း မတက်ရအော်သူအော်..။
လောကဓါတ်ပညာနဲ့လုပ်ထားတဲ့.. ကွန်ပျူတာဆိုတာကြီးကို.. ရွာထဲက..သူကောင့်သားတွေက..သူတို့ပဲ.. ဒေါ်ဘုမအိမ်ဘေး မြေကွက်လပ်မှာ.. ခြင်ထောင်ထောင်ပြီး.. အထဲကနေဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသယောင်ပြောနေတာမို့.. အဲဒါကြီးက.. သူများရွာက လုပ်ထားတာကြီးဆိုပြိး.. အထောက်အထားနဲ့ .အမှန်တရား.ပြောပြတာကို…သူကြီးက ရွာကိုမချစ်ဖူးလေး.. ရွာသားတွေဆို အမြဲနှိမ်တယ်လေး.. ဖြစ်ကြပြန်ရော…။
သူကြီးဒီရွာကို ချစ်တာပေါ့ကွယ်..။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်.. ဓါးမဦးချ.. တောတွေ..ခြုံတွေ.. ကိုင်းတွေခုတ်ထွင်းပြိး..တည်ထောင်ထားမင့်ဟာ.. နော..။
သူကြီးရေ သူကြီးချစ်တတ်တဲ့ရွာလေးကို ဂုဏ်ကျက်သရေညှိုးနွမ်းအောင်ပြုလုပ်နေသူများကို ထိရောက်စွာအပြစ်ပေးစေလိုပါတယ်။ကျွန်မကိုလဲ လိုအပ်ရင် ရွာပြင်ပို့ လိုက်နိုင်ပါတယ်။
သဂျီးရဲ့ စာကို ထရန်စလိပ် လုပ်ပေးလိုက်မယ်။
သဂျီးသည် ပေါင်ချိန်၏ တရားရုံးရှေ့ရှိ စည်ကြီးကို ထု၍ အောက်ပါအတိုင်း အော်နေသည်။
“ရွာသားတွေ မတရားစွပ်စွဲတာ၊ အနိုင်ကျင့်တာ ခံနေရပါတယ်။ ပေါင်ချင်းထျန်း ( ပြည်သူ့တရားရှင်) က ကျွန်တော်မျိုးအတွက် တရားမျှမှု ပြန်ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါ။”
သူကြီးမမေ့နဲ့နော်။ သူကြီးထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းနဲ့ သူကြီးလွတ်ကြောင်း သက်သေလိုက်ပေးထားတယ်နော်။
တော်ကာရယ် … တို့ရွာသားတွေက ခပ်ပိန်းပိန်းရယ် …
ပြောချင်ရင်လည်း ဒဲ့သာပြောချလိုက် …..
တီဗွီပြင်ဆရာကို နောက်ဆို လွှတ်တော်အမတ်ထံ သွားတိုင်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါ။ သူဖြစ်နေတာတွေက နိုင်ငံရေးကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်..။
ဖတ်ကာစက ဘာကိုဆိုလိုပါလိမ့်ပေါ့ တဖြည်းဖြည်း ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းကနေ သဘောကပေါက်လာတော့ တော့ကာရေ သဘောကျလွန်းလို့ ရီမိပါကြောင်း။
သူတို့နှစ်ဦး ပြောကြားသည်များကို ခပ်ကင်းကင်းနေသူတစ်ယောက်က ရွာကိုမကင်းနိုင်ဘဲ မတော်တဆ နားထောင်မိသွားရမှာတစ်ဆင့် ရွာသူ/သားတွေသိအောင် ပြန်လည်ဖောက်သယ်ချလိုက်သည်က …
!#$^&*(&^&$#%@@$^%$&^@$@%&$^#@%$@^$^%&$$@$!$&$&@%@% …. :D
(မှတ်ချက်။ ဘာသာစကား အသစ်သင်ယူလိုသူများ အမြန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါသည်) .. :D
King ၏ စကားဝှက် ဘာသာပြန်- သင်တန်းစာမြည်း (!#$^&*)
သည်းခံခြင်းသည် အောင်မြင်၏တဲ. ကြားဖူးတာပါ
ကျနော်ဆို ဗလိုင်းကြီး ခွပ်တာ ခံရတာ များနေပြီ
တို့ သဂျီးက အင်မတန် တဘောကောင်းတယ်..
တော်ယုံတန်ယုံ ၀န်တီးတိန်တွေဘာတွေ မပေးတတ်ဘူး….
ကိုပေါက်ဖော် ရေ သူကြီးကသဘောမနောကောင်းလွန်းတော့ လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်ပေမယ့်၊ခံရခက်တဲ့အပြောအဆိုတွေနဲ့ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်နေတော့ သူကြီးက အပြစ်ပေးဖို့ သင့်တယ်မဟုတ်လား။
အများနဲ့ တယောက်တည်း စိန်ခေါ်ရတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ တောင် မပါသေးဘူး။
သဂျီးဆိုတာ သမာသမတ်ကျတယ် ဘယ်လောက်များ သမာသမတ်ကျသလဲ ဆိုရင်…..
ဘာဖြစ်ဖြစ် ရှူဆေးလေး ဆောင်ထားတာ.. နှာစေးတတ်လို့။
ဒို့ရွာသဂျီး ပြသနာ ပြီးမှ နှာဘူး ရှာတွေ့တတ်လို့ နှာဘူးလေး ဆွဲပြီး.. တုန့်ချိချိနဲ့ (ဖျားထားလို့ အားပြတ်နေတာ)
ဟေ့.. ကလေးတို့ ပြသနာ မဖြစ်ကြနဲ့.. သဂျီး အမိန့်နဲ့ သာတဲ့လူ အနိုင်ပေးလိုက်သည်။
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ဘာပြောလိုက်တယ်………… အင်းးး ဟိုဘာသာပြန် သင်တန်းတောင် သွားတက်ရမလိုပါပဲလား…….
ငါက အတော်လေးပိန်းတယ် မင်းဘာဆိုလိုမှန်းကိုမသိဘူးကွာ။
မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ တန်ခိုးမပြရလို့ ပညတ်ထားပြီးမှ တိတ္ထိတွေ နှိမ်နှင်းဘို့လိုတော့ ၀ိနည်းပညတ်တွေဟာ ငါဘုရားအရာ မဟုတ်လို့ဆိုပြီး တန်ခိုးပြာဋိဟာပြရတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါရဲံ.၊
သဂျီးကလည်း comment ထဲမှာ ပုံထည့်ခွင့်လေးပေးလိုက်ပါလား။
လိုအပ်သလို အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ထုတ်နိုင်ဖို့ ဆိုရင်
ဒီမှာလာပြီး သင်တန်းလေး လာတတ်ဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်။
မသိ တတ်စရွာသားသစ်လေးများမို. ခွင်.လွတ်တော.မူကြပါကုန်…. ဒူဝေေ၀
အခုမှ ဖတ်မိတော့တယ် … အတော်လည်း ရေးတတ်ပါပေ့မောင်ပေရယ် … Staire မှာ ဆရာကြီးပါပဲ … :D
ဆရာကြီး မဖြစ်သေးပါဘူး ဗျာ
ဂျူနီယာ မောင်ပေ မှ
စီနီယာ အီးတုံး ၏
ချီးမြှင့်မှု ကို မခံယူရဲသေးပါကြောင်း..
စီနီယာ အီးတုံး ၏ အားပေးမှု အတွက်